Ny karatra majika dia nahatratra ny App Store niaraka tamin'ny lalao 'The Gathering Arena' | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 29/03/2021 22:00 | Lalao IPhone, About us
Ny lalao karatra sy birao dia iray amin'ireo fialamboly lehibe indrindra amin'ny fianakaviana rehetra. Na izany aza, miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana sy ny fahatongavan'i teknolojia vaovao, Mahatsapa ireo orinasa fa ilaina ny manao dingana haingana amin'ny sehatra nomerika mba ho tafavoaka velona. Ity no tranga lalao goavambe toa ny 'Monopoly' na 'Catan' izay nandefa ny lalaon'izy ireo mba hanandramana hisarika ny sain'ny mpilalao any amin'ireo fivarotana fangatahana. Magic: The Gathering dia iray amin'ireo lalao karatra nilalao indrindra teto amin'izao tontolo izao ary andro vitsy lasa izay dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy izy ireo 'The Arena Fivoriana', kinova feno miaraka amin'ireo mekanika mitovy amin'izany ao amin'ny App Store sy Play Store.
Avereno jerena ny karatra Magic amin'ny lalao ofisialy vaovao azo alaina ao amin'ny App Store
Efa fantatrao izany. Sintomy ary ankafizo ny lalao karatra stratejika tany am-boalohany amin'ny findainao. Mora mamaha ny dabilio matanjaka, mahazo valisoa noho ny filalaovana fotsiny, ary mitsambikina miaraka amina endrika lalao isan-karazany ho an'ny mpilalao amin'ny sehatra rehetra. Tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa hanombohana milalao Magic.
Na efa nilalao karatra Magic ianao na tsia dia manomboka ny lalao ny 'The Gathering Arena' mampianatra antsika hilalao avy hatrany. Tsotra ny tanjona: andramo ny mikapoka ny mpanohitra. Ho an'ity dia mila mampiasa ny karatray izahay. Karatra mandany ny mana hampiasana ny zavaboary, ny famosaviana ary hampivelarana fahaizana manokana amin'ny fahavalo.
Manana lalao fanampiny ny lalao: ny valisoa isan'andro. Io dia ahafahan'ny mpilalao mahazo karatra tsara kokoa mamela azy ireo handresy ny mpanohitra mora kokoa. Izy ireo koa dia mety ho mividy birao amin'ny alàlan'ny fividianana fampiharana. Ireo takelaka mitovy izay anananao ao amin'ny kaontinao izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny kaontinao mitovy amin'ny sehatra hafa toy ny amin'ny macOS, Windows na Android. Amin'izany fomba izany, nahavita namorona lalao multiplatform i Magic mba hisarihana ny isan'ny mpilalao faratampony.
Raha te hiditra amin'ny tontolon'ny karatra Magic ianao amin'ny iDevice dia tsy maintsy manana iPhone 8, X, XR, XS, XS Max, 11 ary 11 Pro na 12 (modely rehetra). Mikasika ny mifanentana amin'ny iPad, ny lalao dia mifanaraka amin'ny iPad mini andiany faha-5, ny iPad iPad amin'ny taona 2020, ny iPad Air Generation faha-3 sy faha-4, ny iPad Pro 11-inch ary ny iPad Pro 12-inch ao amin'ny taranaka faha-3 sy faha-4.
Magic: Ny kianjan'ny fanangonanamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Taratra majika no nahavoa ny App Store niaraka tamin'ny lalao 'The Gathering Arena'
Famporisihana sy fotodrafitrasa ho an'ny mpiasan'ny Apple hatao vaksiny manohitra ny COVID-19
Sarin'ny iPad prototype mampiseho fa nisy mpampitohy roa izy